ဆရာမကြီးကြည်အေးရဲ့ ကဗျာအသွားမျိုးကိုလဲ သတိရမိစေပါရဲ့
ကဗျာတွေ စာတွေလည်း ဒီထက်ဒီထက် ဖန်တိးရေးသားနိုင်ပါစေခင်ဗျာ
Your article is so difficult to fully understand for me.
may be generation gap
may be lack of knowledge about poem.
အမရေ.. ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း မောလာတယ်။ မွန်းကျပ်လာတယ်.. ဘာလို့လဲ သိဝူးနော်
(ဒါနဲ့ - သက်သေခံပစ္စည်းဖြစ်ရမယ် မဟုတ်လား... စာရိုက်တာ မှားသွားတယ်ထင်ပါ့...)
ကဗျာလေးကို သရုပ်ဖေါ်ထားတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် စကားပြေကိုပဲ ပံ့ပိုးထားတာလား၊
သမရိုးကျစကားပြေ ကနေခွဲထွက်ထားတဲ့ အိန္ဒြာ စတိုင်အတိုင်း တစ်ကြောင်းဆီ တိုင်းမှာ ဆွဲဆွဲငင်ငင် ရှိုက်ထားတာ ...
ဒါ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်မဟုတ်သလို ကဗျာတစ်ပုဒ်လဲ
ဟုတ်ပါ့မလား ကျတော်အနေနဲ့ ကြေကြေကွဲကွဲ တယောသံပဲကြားနေရတယ်။
ဒီဝတ္တုကို ဖတ်ရတာ အထက်ကလူတွေ ပြောသွားသလို
စိတ်ထဲမှာ လည်းမောလာတယ်..စိတ်ချည်းသက်သက်သွားရလို့ထင်ပါရဲ့..။
စာသားတွေ တစ်လိုင်းပြီးတစ်လိုင်း သေချာဖတ်နေမိတယ်..
“ကဗျာဆိုတာ စိတ်ကျူးလွန်ခဲ့သမျှ ပြစ်မှုတွေအတွက် အခိုင်လုံဆုံး သက်သေခံပစ္စည်းတစ်ခု” တဲ့ ဒီစာတစ်ပုဒ်အတွက် အားယူလိုက်တဲ့ အဖွင့်စာကြောင်းကိုက လူကို စပြီး ဖမ်းစားတော့တာပါပဲ..။
စာသားတွေ၊ စကားလုံးတွေ ကောင်းလွန်းနေတာ ထောက်ပြနေစရာ မလိုလောက်အောင်ပါပဲ.. လုံးဝသေချာတယ်..
ကျစ်လစ်တဲ့ စကားစု စကားဆန်းလေးတွေကို ဖတ်လိုက်ရတာ တကယ့်ကို အရသာထူး၊ ရသထူး..။
ခပ်နွဲ့နွဲ့ ဖွဲထားတာလေးတွေက ဆန်းသစ်တဲ့ အရောင်တမျိုးကို မြင်လိုက်ရသလိုပါပဲ..။
“စိတ်ချည်းသက်သက်.. ခရီး” ကို
စိတ်တွေ လွင့်ရင်း လွှင့်ရင်း
လူမသိ သူမသိ ကျဆုံးလို့လည်း နေကြရဲ့...
ကဲ...ရင်ဘတ်ချင်းတီးခတ်တဲ့ ဂီတတွေ အတွက် နရည်စည်းဝါးတွေ မှန်ဘို့လိုတာလား...
ဘ၀တွေများစွာထဲက ဘ၀ဆိုတာကို ကျင်ယူဘို့အတွက် ချစ်ခြင်းတွေများစွာထဲက အညတရမေတ္တာတရားတွေကို စွန့်ပစ် ကျောခိုင်း...
အို....ဒီဒွ န္တယာကြီးမှာ စိတ်ချည်းသက်သက်တဲ့လားကွယ်....
ညီမရဲ့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ရေရွတ်နေတဲ့ကဗျာတစ
အကိုတို့တတွေ စိတ်တွေနဲ့ထွက်နေခဲ့မိတဲ့ ခရီးတွေက
မိုင်ပေါင်းကုဋေမက ရှိခဲ့ကြပြီနော်...ဘယ်တော့မှ မဆုံးတဲ့ ခရီးတွေပဲပေါ့ ညီမရေ...
အစ်မ မသက်ဇင် ရဲ့ ပိုစ့်ထဲမှာ အိန္ဒြာ ရဲ့ ကဗျာလေးကို ထည့်ညွှန်းထားလို့ အဲဒါလေးဖတ်ပြီး ရောက်လာတာ...။ ကဗျာချစ်သူချင်းမို့ တွေ့တွေ့ချင်း ခင်မင်မိကြောင်းပါ....၊ ကဗျာကောင်းများ ဆက်လက် ရေးသားနိုင်ပါစေ...
ရင်ထဲ စွဲငြိလိုက်တာ ကဗျာ ဆရာမရယ်
အထက်မှာ ပြောသွားကြတာတွေက နောက်လူပြောစရာမကျန်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ပါဘူး(မပြောတတ်တာလည်း ပါတာပေါ့လေ)။ ဝေါဟာရ အဖွဲ့အနွဲ့နဲ့ချည်း ခင်းကျင်းထားတဲ့ ပြတိုက်ထဲ ရောက်လာသလိုပဲ။ အလေးပြုသွားပါတယ်ဗျာ။
ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ။ မက်ဆေချ့်က ဘာကိုပေးချင်တာလဲ။
အစမှာတင် ရင်ဘတ်ထဲစောင့်ဝင်တော့တာပဲ...။ အလယ်တစ်ခုလုံးလဲ မျက်တောင်မခတ်မိ...။ အဆုံ့းကြမှ သက်ပြင်းတစ်ခု ထွက်ခတ်ခပ်သွားလေရဲ့....။
ရည်ရွယ်ချက်က ထွေပြားနေတဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အာရုံလွင့်ပါးမှုတွေကိုပြချင်တာပါ..။
လူတွေဟာ..စိတ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုခရီးတွေကို ရောက်အောင်သွားနေကြသလဲ ဆိုတာမျိုး..
နောက်...ငါ ဒီခ၇ီးကိုသွားခဲ့တယ်ဟေ့ လို့ ၀န်ခံရဲတဲ့ သိတ္တိမျိုး....ရှိမရှိ..
“ကဗျာဆိုတာ စိတ်ကျူးလွန်ခဲ့သမျှ ပြစ်မှုတွေအတွက် အခိုင်လုံဆုံး သက်သေခံပစ္စည်းတစ်ခု” စာသားက ရင်စည်ကိုလာထိပြီး ပဲ့တင်သံတွေအထပ်ထပ် စိတ်ကို ရိုက်ခတ်သွားတယ်၊ စိတ်ချည်းသက်သက်ခရီး- ဒီခရီးကို အိပ်ရင်းနဲ့လဲ သွားနေရရဲ့။ သွားနေအုံးမယ် စိတ်ရှိသရွေ့ပေါ့။ စိတ်ခရီးတွေ များများဖန်တီးရေးသားနိုင်ပါစေ။
ပြီးအောင် ဖတ်ပြီးရင် အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုခုဆီ ရောက်မယ်ထင်နေတာ...၊ ထွေပြားနေတဲ့ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အာရုံလွင့်ပါးမှုဆိုတာကြီးကို ရေးထားလို့များ နားမလည်တာများလား...။ နားမလည်ပေမယ့် အားပေးနေပါတယ် အစ်မရေ...။
စိတ်ချည်းသက်သက်ခရီးကို စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်တကပ်အချိန်မှာမှ လာဖတ်မိရင်း မျောပါသွားခဲ့ပါတယ်။
မကြီး မသက်ဇင်မှတဆင့် အလည်ရောက်ပါ၏..ကောင်းပါဘိ..အဆင်ပြေပါစေ...
အစအဆုံး သေချာဖတ်သွားတယ် .. တစ်ချို့နေရာလေးတွေမှာ စိတ်ထဲ နင့်နင့်သွားတာလေးက
အရေးအသားကောင်းတဲ့ မကြီး အတွေးနဲ့ အရေးကြောင့်
ဆိုတာ နားလည်သလို တစ်ချို့နေရာလေးတွေမှာ ခံစားမှုလေးတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်တော့ ဟိုအဝေးကို လွင့်လွင့်သွားသလို ဟာဟာသွားတယ်...။
ပို့စ်ရဲ့ ပြည့်ဝမှု အနှစ်သာရကို အလုံးစုံမသိဘူး ..။
ဖတ်လို့ကောင်းသလို စိတ်ကို ဆွယ်ထားတဲ့ပို့စ်တစ်ပုဒ်မို့
နောက်တစ်ကြိမ် လာဖတ်ဦးမယ် ..။
မတွေ့တာ ကြာပြီ .. မကြီး ..။
အစ်မရေ၊ နောက်ကျလို့ ခွင့်လွှတ်ဗျ။ အပေါ်က ပြောထားတာတွေက ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေပါပဲ။ အစ်မရဲ့ တကယ့်ခံစားချက်ကနေ တွေးယူတာလား သိချင်စမ်းပါဘိ၊ အစ်မရဲ့ မောင် ကိုရော ဒီလိုဟာလေးတွေ ပြဖြစ်လား၊
ဟင်း..ဟင်း.. ရွာပြန်မှ အိမ်တိုင်ရာရောက်.. ပရင့်ထုတ်ပြီး သွားပြအုံးမယ်.. နောက်တော့မှ မျက်ရည်လေး စမ်းစမ်း.. စမ်းစမ်းနဲ့ မိုးမောင် နင်အတော်ရက်စက်ပါလား မပြောနဲ့။
ကလေး ကလေးအရာကို မနေဘူး...
တစ်ခေါက် ထပ်လာဖတ်သွားတယ် .. ပို့စ်လေးကို
၀တ္ထုတိုလေးက ဆွဲခေါ်သွားတာ ဖတ်နေရင်းနဲ့ သူမ နေရာမှာ တခါတည်း မျောပါပြီး မောလိုက်တာ.. မှော်ဝင်လက်နဲ့ ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ထင်ပါရဲ့..။
ဒါလေးကို လာဖတ်နေတာ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး
အစ်မရေ အရမ်းကောင်းတယ်ပဲ ပြောတတ်တော့တယ်..